Chipatara Chekuchengetedza - Kodzero dzevanhu & Chiedza Art na Art PixelHELPER Foundation
Sticky post By Oliver Bienkowski Posted in mishandirapamwe Permalink
Zvikumbiro zveva Citizen kuti vachengetedze iyo Loreley Clinic nemubhadharo
Sticky post By Oliver Bienkowski On 17. January 2012
Iri rinotevera muenzaniso mukuru kurwira rusununguko demokarasi kuburikidza nereferendamu. Panzvimbo pekuongorora yedu yekushandisa oparesheni, vezvematongerwo enyika vari kumhanyira kuchikumbiro chevagari vedu pane zvese zviteshi, zvinotiratidza kuti tava munzira chaiyo. Chero bedzi pasina dare rekutonga rinofunga Nhasi, kunyange Iyo Iyo Nhoroondo Yepasirose inoshandiswa zvisiri izvo nekuda kwekuvaka-kuvaka. Tava kukumbira ziviso yekupokana.
Ivo vezvematongerwo enyika vanoda kuvhara Chipatara cheLoreley vanoshanda nenzira dzekuzvidza idzo dzinongoshandiswa chete munyika dzesimba. Mubatanidzwa wemadhorobha nemadhorobha unokwira kuenda kudare uye mafungiro avo anopiwa kuvagari sekutongwa kwedare rekutonga. Vamwe vagari vakadaidzira mipiro pakuratidzira kwechirongwa chevagari vekare "Chekuchengetedza makiriniki eLoreley", makambani ega ega akapa mari inodarika € 10.000 kusangano rekuvandudza zvipatara. Isu takagamuchira € 0 muzvipo uye chikumbiro chedu kuvagari chinoshoropodzwa nekuti tiri kutevera kurudziro yaMehr Demokratie e. V. vakanyora nhamba yedu yeakaunzi yemupiro pane iyo jira.
Mukana wekupedzisira wekuchengetedza iyo Loreley Clinic chikumbiro chevagari mune rimwe nerimwe remamwe maguta maguta. Chero ani zvake anogara kwekutanga muguta raanogara uye anopfuura makore gumi nemasere anogona kusaina. Ndokumbira ugovera magwaro acho zvakanyanya munzvimbo yako.
Bhura pasi pasi kuti usarudze pakati peOberwesel, St. Goar neiyo Hunsrück-Mittelrhein Association.
Nepfungwa itsva yemushandi wePixelHELPER Foundation, isu tiri kutungamira makiriniki eLoreley mune ramangwana rakachengeteka!
Zvikumbiro zveguta reOberwesel
Dzvanya pamufananidzo kuti utore siginicha template. Izvi zvinofanirwa kugara zvichigoverwa pamwe chete neiye oparesheni pfungwa.
Zvikumbiro zveguta reSankt Goar
Zvikumbiro zvevagari venharaunda yeHunsrück-Mittelrhein
Sevha makiriniki aLoreley. Iyo PixelHELPER Foundation isiri purofiti GmbH inoda kutora chipatara uye kuenderera mberi ichizvibata senge 1-imba mhinduro. Chirevo chechiedza pane Ministry of Health muBerlin
Mamiriro ezvinhu azvino 20.04.2020/21/15 XNUMX:XNUMX
Mukomputa yazvino Kubvumbi 2020 yeCDU Oberwesel chimwe chinhu chisina kunaka chinonzi, chekuti kiriniki ingangove isiri mari.
Iyo Krankenhaus GmbH St. Goar-Oberwesel, sezita zvarinoratidzira, ndeye GmbH uye kwete isiri-purofiti GmbH. Izvo zvinongoregererwa kubva kune mimwe mitero, asi kwete rubatsiro. Muchidimbu, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti kusunungurwa pamutero wekutengeserana, iyo
Mutero wekutengesa uye mutero wepfuma unopihwa kuzvipatara zvese zvinosangana nezvinodiwa zve § 67 AO. Izvi hazvinei nekuti chipatara hachisi chekubatsira. Kuregererwa kubva kumubatanidzwa mutero kunongopihwa kuzvipatara izvo zvisingabatsiri mukati meiyo zvinoreva §§ 51-68 AO. Parizvino iri GmbH inosanganisira mikana yose yekubvisa mari. Mapazi akavharwa uye tekinoroji yechipatara inoendeswa kune zvimwe zvipatara. Iko kushandurwa kuve isina-purofiti GmbH inogona kuwanikwa. Batsirai nezvikumbiro zvevagari kuti vaenderere mberi nekusaita basa kwemakiriniki facebook.com/loreley-klinik nekambani isingabvumirwi mari isingabvumirwe, mari yakawanda iripo kupfuura neiyo ine dhomero yakamisikidzwa yekambani, purofiti haigone kuenderera, asi inofanirwa kushandiswa pazvinhu zvisina-mari muchipatara chitsva chisina mari. Kwedu kunogona kuve kiriniki pachayo, nzvimbo yepamusoro uye musangano mutsva wevakaremara munzvimbo yekare muSankt Goar. Kuti uwane rumwe ruzivo, ingo tungamira pasi pane ino peji.
Mamiriro ezvinhu azvino 19.04.2020/13/00 XNUMX:XNUMX
Tinotanga zvikumbiro zvitatu mumaguta evagovani kuitira kuti tiwane "musangano wevashambadziri" mutsva unokumbira Marienhaus Holding GmbH kuendesa zvikamu zvako makumi mashanu nezvishanu muchipatara kuPixelHELPER Foundation isiri purofiti GmbH, sezvawakanga wapa kuRed Cross.
Pamusoro pezvo, chipatara chinofanirwa kushandurwa kuva kambani isingabatsiri kuitira kuchengetedza purofiti yese mukambani mune ramangwana uye kwete kugovera vanogovana. Kuti tiite izvi, tinofanirwa kutora approx .. mazana matatu masaina kubva kuvhota pamudiwa mumwe nemumwe panzvimbo yacho.
Iyo PixelHELPER Foundation isingabatsiri GmbH yakagadzira pfungwa uye inopa kuti igadzirise uye kuenderera mberi kwekiriniki muOberwesel. Zvipiriso zvine tarisiro yakakosha yekuisirwa zvinofanirwa kugadzirwa kune Sankt Goar nzvimbo. Izvi zvinosanganisira mafomu matsva ekugara kwevanhu 8-16, pamwe nemusangano wakasangana wevanhu vakaremara.
Chipatara chiri muOberwesel chinofanirwazve kuitisa madhipatimendi ehunyanzvi anodiwa seyakanyanya kuchengetedza chipatara kuitira kushanda sepachipatara chakazara.
Mukubatana pamwe nekubatana neUni University yeMarburg uye makambani epamberi ehunyanzvi hwekurapa, musangano wevakaremara uchaburitsa zvinhu zvakafanira uye zvakavimbiswa zvehuni zvemapuranga izvo zvinoshandiswa kutumira kuAfrica.
Kuvakwa kwemusangano mutsva wevakaremara, kusanganisira zvipingamupinyi- zvisina hupenyu hwekugara, mari inosvika EUR mazana matanhatu ezviuru inofanira kunyorerwa kubva kuAktion Mensch.
Iyo PixelHELPER Foundation inoda kuratidza zvakatanhamara kuti zvinodikanwa zveruzhinji rwekwembera zvinogona kuzadzikiswa sei munzira yemazuva ano uye inotungamira mune remangwana.
Kuitira kuchengetedza kuchengeteka kwemari, iyo PixelHELPER Foundation ichaisa pfungwa pakuvhura nzvimbo dzekutsvaga mari itsva kuitira kuti ive nechokwadi chekuti ichaenderera mberi sechipatara chisingabatsiri. wedzera.
Pano, iyo Pixelhelper Foundation, kuburikidza nevatsigiri vayo, inogona kudonha pasi kuneti inozivikanwa network mune yehutano yeGerman tsika.
Sezvo kambani isingabatsiri inokweretesa mari isingateeri zvayakawana mhindu, hapana kugoverwa kwemhindu kunoitwa kune vanozogovana, tinodyara chero zvawanda muchipatara uye nemawoko abata maoko.
Iko kutariswa kwechipatara chisina-purofiti chinogara chiri pane zvakajairika - zvinoenderana nekugara zvakanaka kwemurwere wega. Izwi rekuti "risingabatsiri" rine chekuita nemutemo wemitero, nekuti zviitwa chete zvakanyorwa mundima 52 yekodhi mutero zvinoshandira ruzhinji zvinofungidzirwa kuti hazvina pundutso mumutemo wemitero - semuenzaniso, zvine chekuita nemari mubazi rezvehutano .. Iyo isiri purofiti GmbH (gGmbH) inobvisirwa mutero wekambani. . Mukudzoka, iyo gGmbH inosungirwa kushandisa mari inogadzirwa chete pazvinhu zvisina basa.
Saka isu tinoda kuve isina-purofiti kiriniki nyanzvi - uye ita zvinoenderana. Izvi zvinotitendera kuti tishandure, izvo zvinobatsira murwere. Nekuti isu ipapo hatishande chete nenzira inokwanisa kwazvo mukutevedzera zvawazvino zviyero, asi zvakare zvichienderana neane humwari, hunhu uye huhupfumi hwenhungamiro - izvi zvinoreva kuti isu tinoda kushandisa ese edu ezvemari uye zviwanikwa zvevanhu kubatsira varwere vedu.
Shure kumashure: Iyo PixelHELPER Foundation yakavambwa nevanoverengeka Freemason uye nemwenje wechiartin Oliver Bienkowski. MuHamburg kune chipatara cheMasonic muRissen, icho chinoshanda neRed Cross, pamwe neMamel Retirement Home iri pakati peHamburg. Chipatara cheFreemason muHamburg chakavhura masuwo avo musi wa3 Gumiguru 1795 paDammtorwall sekutanga kosi yekubvumidzwa kwevanorwara, iyo yaimboshayikwa zvachose muHamburg. Yakatangwa kumiswa sepachipatara chevashandi vechikadzi uye yakawedzerwa makore mashoma mushure mevashandi vechirume.PixelHELPER Foundation payakabviswa, pfuma yakaenda kuFreimaurer Hilfswerk eV, yaive chikamu chesangano rekubatsira.
Mamiriro ezvinhu azvino 16.04.2020/12/00 XNUMX:XNUMX
Isu tiri parizvino kutsvaga imba yekuroja mudhorobha reOberwesel. Tichashandisa nzvimbo iyi kuronga zvikumbiro zvitatu zvekuchengetwa kwechipatara uye kugadzira chingwa chakamendwa mumisasa yevapoteri nevasina pekugara. Panongowanikwa nzvimbo yacho, masiginecha emazita emaguta ese matatu anogona kutorwa pasi papeji ino. Mushure mekutora masiginecha, unogona kuendesa muzvinyorwa zvekukumbira kwatiri pane saiti. Referendamu inotanga pamberi paMay 3, 3
Mamiriro ezvinhu azvino 14.04.2020/12/00 XNUMX:XNUMX
Isu tinoona mukutadza kutaura kwedu kwekutenga kupihwa naMarienhaus Kubata kunyengedza kwakajeka kwevamwe vagovana. Iyo PixelHELPER Foundation isina-purofiti GmbH yakasangana nemumiriri wezvemutemo gweta muKoblenz & mubatanidzwa Mehr Demokratie eV kuti vaongorore referendamu kuti vatange "Musangano wevashambadzi vanoshamisa kuti vadzime chisarudzo chaApril 09.04.2020th, 1". Kuendeswa kwereferendamu kwakagadzirira, asi kunofanirwa kuongororwa zviri pamutemo. Referendamu yaizosungira manejimendi manejimendi kuita sarudzo pamusangano unoshamisa wevashandi. Gweta remutemo wekambani rinoongorora matanho emutemo anokwikwidza. Nemusangano unoshamisa wevashandi, zvikamu zvacho zvinogona kupihwa kuPixelHELPER Foundation gGmbH, uye kumwe kushanda kweXNUMX imba muOberwesel kwakaenderera mberi, pamwe nekuchengetedza nzvimbo yepamusoro yevagari.
Kunyangwe isu takatumira kaviri kutora kutora kwedu kumutauriri wekambani Marienhaus Kubata neemail, pakanga pasina mhinduro kune zvatakapiwa kunze kwekungofona yakadzoka kubva kuna Heribert Frieling.
Chipatara cheLoreley & cheVakuru veVagari 'chakakosha zvakanyanya senzvimbo yeruzhinji yeOberwesel. Pamusangano wekupedzisira wevagovani musi waApril 09.04.2020th, XNUMX, Marienhaus GmbH haana kuita izvi, kunyangwe paive nechipo chekutora kubva kuPixelHELPER Foundation isina-purofiti GmbH, uye mibvunzo yese nezve izvi, hapana zvimwe zvekutora zvaive zviripo. Isu tinoona mhosva yekuparwa kwekunyepedzera. Marienhaus anofambisa kuverenga kune zvimwe zvipatara uye pakupedzisira anoda kuchengetedza iyo yepamusoro centre semombe yemari. Vanozvishandira vanoita chinhu chakadai muGerman vanoonekwa sevanobhuroka mhosva. Chero ani anofambisa kuverenga, kureva midziyo yechipatara, kusati kwasvika kubhuroka anofanirwa nemhosva. Chipatara chakadyiwa naMarienhaus GmbH munzira yekune mamwe makiriniki akaita seBingen. Tinokurudzira vese vagovana kuti vabvunze Marienhaus GmbH kunze kwekambani yeSt. Goar Oberwesel GmbH. Sekambani isingabatsiri, iyo PixelHELPER Foundation haizoiti chero kugoverwa kwemubhadharo asi ichatungamira nzvimbo yepamusoro & chipatara mune ramangwana nekuda kwezvikonzero zvisina basa.
Mari yekugamuchira irisiti inotumirwa pakarepo. Risiti yako yekufambisa yakaringana kune irisiti yemupiro kune hofisi yemutero inosvika € 250.
Nepfungwa yekujekesa pane izvozvo Federal Ministry yehutanot iyo PixelHELPER Foundation inotendeuka kuva yekuvhara kweSt. Goar / Oberwesel. Yedu yekufunga: Iyo isiri iyo purofiti GmbH PixelHELPER Foundation inotora pamusoro pe55% chikamu kana iyo Rhineland Palatinate Ministry of Health kubva muhospital organic fund, iyo yatove yakatemerwa kubhadharisa vashandi, mihoro yevashandi, kuenderera mberi kwekushanda uye kuwedzera chipatara, izvo zvaizopa PixelHELPER mukana wekugadzirisa kiriniki nekuchengeta vese vashandi muchipatara cheOberwesel kweanopfuura gore. Imba iri kuSt. Goar inofanirwa kushandiswa kuvaka michina yemhepo inowanikwa pasirese yenyika. Yunivhesiti yeMarburg ichakurumidza kuburitsa zvirinyore zvekushandisa zveAfrica kune veruzhinji. Nemidziyo yemapuranga uye zvikamu zviri nyore kubva mudura remahara, macomputer anokwanisa zvakare kuvakwa nyika dziripo ikozvino inoshanda chipatara system. Uyezve, iyo PixelHELPER Foundation ine hofisi yekuita muSt. Chipatara Goar yakamisa zvimwe zvisingabatsiri rubatsiro zvakadai sebhekeni yechingwa yakakanyiwa kuti uwane kugadzikana kwechikafu, ronga mutambo wehunyanzvi uye utore mamwe matanho ekutsigira vagari vemuSt Goar & Oberwesel. Denda rinotevera riri kuuya, Hondo Yemashoko isati yasvika kune zvipatara zvekubatsira makumi mana kuGermany, izvo zvakavharwa nekuda kwekuchengetedza. Munguva dzedenda, hatikwanisi kuvhara zvimwe zvipatara. Mhinduro yaJens Spahn inoteverwa neemail, ichitaura kune Ministry of Health muRhineland-Palatinate. Vezvematongerwo enyika vanofanirwa kukurumidza kuita izvozvi. 22th Mamirioni emigubatsiro anofanirwa kuburitswa kuitira kuenderera mberi kwekushanda uye mihoro yechipatara uye nekambani nyowani isiri-faida kambani kuedza kunofanirwa kuitwa kuti vaunze chipatara muZiro dema mumakore mashoma anotevera, nekuti kusiyana neMarienhaus GmbH, iyo isina purofiti GmbH haifanirwe kuburitsa purofiti. Iyo ingave iri nzira yakanaka yekumbofungidzira kuti chipatara muOberwesel chiitirwe zvechipatara. Tinokumbira kune RLP Ministry of Health kuti iburitse mari kubva kumakoronga mari, kuendesa zviga kuPixelHELPER Foundation kuMarienhaus GmbH uye kununura vashandi kubva muOberwesel Hospital. Zvekuti isu tigone kushandira chipatara uye imba yevakuru vanhu parutivi neramangwana mune ramangwana rekutarisirwa kuri nani. Hurumende yeRhineland-Palatinate inosungirwawo kushanda chipatara muOberwesel nechinangwa chevashanyi vari kushanyira Middle Rhine, tinovimba kuti vezvematongerwo enyika vachatendera. Iyo yekutenga inopihwa neemail kune mutauriri wekambani Frieling weMarienhaus GmbH haisati yapindurwa. Asi isu tinofungidzira kuti seGerman Red Cross, yakapihwa ruoko rwe 55% danda, Marienhaus GmbH anodawo kutipa iyo 55% danda kune imwe euro.
Zvikumbiro zveva Citizen kuti vachengetedze iyo Loreley Clinic nemubhadharo August 13th, 2020Oliver Bienkowski